Greenwashing, "အစိမ်းရောင်" စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့် | Bezzia
Greenwashing၊ "အစိမ်းရောင်" စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့်
မာရီယာ vazquez | 14/05/2022 10:00 | လက်ဆောင်
ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော စားသုံးမှုအလေ့အထများကို သင်ပြောင်းလဲနေပါသလား။ ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဒီတံဆိပ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီထုတ်ကုန်တွေက မင်းကိုရောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာလားဆိုတဲ့ သံသယတွေ အများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အတော်လေးလွယ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဆေးခြင်း၏ သားကောင်။
ကုမ္ပဏီတွေက သူတို့အတွက် အမြဲတမ်း တရားမျှတမှု မရှိကြဘူး။ စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများ. အချို့သောလေ့လာမှုများက "အစိမ်းရောင်" ဟုသတ်မှတ်ထားသောထုတ်ကုန်များ၏ 4,8 သည်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအမှန်တကယ်တုံ့ပြန်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းတို့ကို ခွဲခြားသိမြင်ပြီး အစိမ်းရောင်ဆေးကြောခြင်းကို မည်သို့အရေးယူမည်နည်း။
1 Greenwashing ဆိုတာ ဘာလဲ။
2.1 လိမ်လည်မှုများကို သတင်းပို့ပါ။
Greenwashing ဆိုတာ ဘာလဲ။
အစမှာ စလိုက်ရအောင်။ အစိမ်းရောင်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ အတိုချုံးပြောရရင် အဲဒါဟာ တစ်ခုပါပဲ။ အစိမ်းရောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့် ဤဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို ပိုနှစ်သက်သော စားသုံးသူများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှု၏ ထင်ယောင်ထင်မှားပုံရိပ်ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည်။
အင်္ဂလိပ်လို အစိမ်းရောင် (green) နဲ့ washing (လျှော်) ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Encyclopedia of Corporate Social Responsibility အရ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် Jay Westerveld ဒီစကားလုံးကို 1986 ခုနှစ် အက်ဆေးမှာ ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သူက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
eco whitening၊ ecological washing သို့မဟုတ် eco imposture, greenwashing ဟုလည်း လူသိများသည်။ လူထုကို လှည့်စားတယ်။၎င်းတို့သည် မသက်ဆိုင် သို့မဟုတ် အခြေအမြစ်မရှိသည့်အခါ ကုမ္ပဏီ၊ လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို အလေးပေးဖော်ပြခြင်း။
ကုမ္ပဏီများစွာသည် ၎င်းတို့၏ပုံရိပ်ကို သန့်ရှင်းစေပြီး ဖောက်သည်များရရှိစေရန်အတွက် ယနေ့ခေတ်တွင် ကျင့်သုံးနေသည့် မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်က စားသုံးသူ၊ စျေးကွက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရှိပါတယ်။
ခံယူချက်အမှားများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။ စားသုံးသူ၌ အပြုသဘောဆောင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးမှုကို တည်ဆောက်ရန် စားသုံးသူ၏ဆန္ဒကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
ကြော်ငြာထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေါ်မလာဘဲ၊ ပိုကြီးသောသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပါ။သို့မဟုတ် စားသုံးမှုတိုးလာခြင်းဖြင့်။
အခြားကုမ္ပဏီများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ဖြစ်စေတယ်။ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးတာဝန်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။
အစိမ်းရောင်ဆေးကြောခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်၊ ၎င်းကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရား သို့မဟုတ် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ ဤခံယူချက်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများက အဘယ်နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုသနည်း။ ၎င်းတို့ကို သိရှိခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့အား အချို့သောမက်ဆေ့ချ်များအတွက် ပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီး သတိရှိရန် ကူညီပေးပါမည်။
"သဘာဝ"၊ "100% ဂေဟစနစ်" နှင့် "bi(o)" ကို သတိထားပါ။. ထုတ်ကုန်သည် ဤတောင်းဆိုချက်အမျိုးအစားများကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် ၎င်းတို့နှင့်မတွဲပါက သံသယဖြစ်ပါ။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ် အော်ဂဲနစ်ဖြစ်သည့်အခါ ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် တွန့်ဆုတ်မနေပါ။
မရှင်းလင်းသော ဘာသာစကားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။. အခြားသော ဘုံဗျူဟာတစ်ခုမှာ ရေရှည်တည်တံ့သော သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရည်ညွှန်းသော ဝေါဟာရများ သို့မဟုတ် စကားလုံးများကို မိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အယူအဆ သို့မဟုတ် အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိပေ။
အရောင်က မင်းကို အလိမ်မခံပါနဲ့။: ၎င်းတို့၏ အညွှန်းများပေါ်တွင် အစိမ်းရောင်ကို အယူခံဝင်ခြင်းသည် သင့်အား ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို ဆွဲဆောင်လိုသော ကုမ္ပဏီများတွင် အဖြစ်များသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် အစိမ်းရင့်ရောင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် လှည့်စားမှုတစ်ခုရှိသည်ဟု သင်ယခုမထင်သင့်သော်လည်း ၎င်းကိုရွေးချယ်ရန် မလုံလောက်ပါ။
အစိမ်းသက်သက်ကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ စိမ်းလန်းသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံချက်ပေးရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို တွန်းလှန်သည့်အဖွဲ့အစည်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းသည် လုံလောက်သည်မဟုတ်ပေ။
အဓိက ဗျူဟာများကို သိရှိပြီးသည်နှင့် လှည့်စားခြင်းသို့ မရောက်စေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဖြစ်သည်။ အညွှန်းများကို သေချာဖတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသော အချက်အလက်သည် အညွှန်းပေါ်တွင် မရှိပါက မည်သို့နည်း။ ထို့နောက်၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်၎င်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထိုနေရာ၌ မရှိလျှင် သံသယရှိပါ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး တိကျသောသတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်းသည် အများအားဖြင့်သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။
အညွှန်းများကိုဖတ်သောအခါတွင်၎င်းသည်သိရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ တတိယအဖွဲ့အစည်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ မပတ်သက်ပါ။ တံဆိပ်ခေါင်းများအားလုံးသည် တန်ဖိုးတူညီကြသည်မဟုတ်ပေ။ စပိန်နှင့် ဥရောပအဆင့်တွင် အာမခံချက်ပေးသောသူများကို ရှာဖွေပါ။ Bezzia မှာ ပြောထားပြီးသား အထည်အလိပ်ထောက်ခံချက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကန့်အသတ်ရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အာမခံသည့် အခြားသော European Ecolabels များထက် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကတိပြုပါသည်။
လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို တွေ့ရှိရသောအခါ၊ ၎င်းကို လျှော့မတွက်ပါနှင့်၊ သတင်းပို့ပါ။ တူညီသောကုမ္ပဏီအတွင်းနှင့် လူမှုကွန်ရက်များထဲမှ တစ်ခုတွင် စားသုံးသူအဖြစ် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » Greenwashing၊ "အစိမ်းရောင်" စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့်